Daniel Sturridge oo ka mid noqonaya 11-ka hore - BBC Somali
Daniel Sturridge oo ka mid noqonaya 11-ka hore
Weeraryahanka kooxda Liverpool, Daniel Sturridge, ayaa markii ugu horreysay muddo 18 bilood ah waxaa uu ka mid noqonayaa 11-ka ciyaartoy ee lagu bilaabayo ciyaarta saaxiibtinimada ee caawa dhexmaraysa xulalka qaranka ee Ingiriiska iyo Netherlands oo ka dhacaysa garoonka Wembley.
Laacibkan 26-jirka ah Waxaa uu ka maqnaa dhammaan ciyaarihii loogu soo baxayay koobka Euro 2016 isagoo dhaawax ahaa.
"Cidina shaki kama qabto tayada uu leeyahay. Taariikhdiisa gool-dhalintiisa ma malayn kartid," ayuu yiri saaxiibkiis ay Liverpool u wada ciyaaraan ee James Milner, oo isagu kabtan u noqonaya caawa kooxda England.
Maamulaha England, Roy Hodgson, waxaa uu caawa wax ka beddelayaa qaabkii uu uga hortegay xulka Jarmalka oo Sabtidii ay Ingiriisku uga badiyeen 3-2, iyadoo la hubo in goolhaye Fraser Forster uu ka mid yahay 11-ka hore.
Maamulaha England ma uusan xaqiijin in laacibka Leicester ee Danny Drinkwater uu ku jiro 11-ka hore, isagoo sheegay in laga yaabo in ciyaartoygaas Leicester dhexda uga dheela uu markii ugu horreysay u safto xulka Ingiriiska.